STI Myanmar University မှ ရခိုင်ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေး အတွက်
၁၀၀% ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်မည်။ ရခိုင်ဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်နိုင်ရန် STI Myanmar University သည် မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းရှိ ထူးချွန်ကျာင်းသား/ သူများအားများအား အောက်ပါ ပညာသင်ဆုများ ချီးမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ၊ အထောက်အထားများအပြင် မိမိတက်ရောက်လိုသော သင်တန်းကို တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးမြောက်ပါက ရခိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မည်သို့မည်ပုံအကျိူးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း Essay တစ်ပုဒ်ရေး၍ တင်ပြရမည် ဖစ်ပါသည်။
February 2018 ပညာသင်နှစ်အတွက်ပညာသင်ဆုလျှေက်ထားနိုင်သော မဟာဘွဲ့များမှာ University of
Bedfordshire (UK) မှ ချီးမြှင့်မည့်
၁. MBA- ၁ဦး
၂။ MBA ( Hospital and Health Services Management) - ၁ဦး
၃.။ MSc( Public Health) - ၁ဦးတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းအပြင် STI Myanmar University မှ ချီးမြှင့်မည့် ပညာသင်ဆုများမှာ
၁။ Diploma in Business Management (DBM) ၅၀ ဦး
၂။ Diploma in Finance and Banking- ( DFB)-၅၀ ဦး
၃။ Certificate in Business Management- ( CBM) ၅၀ဦး
၄။ Certificate in Financial Services Management (CFS) ၅၀ဦးတို့ဖြစ်ပါသည်။ STI Myanmar University သည် မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်များဖြစ်သော အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အစိုးရတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည့် University of Bedfordshire (UOB) နှင့် ၊ The Opening University of Hong Kong ( OUHK ) တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမူ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ဆေးသိပ္ပံ ၊
ဒီပလိုမာသင်တန်းများ ပို့ချပေးလျှက်ရှိရာအာင်မြင်ပြီးစီးသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ထင်ရှားအောင်မြင်စွာ ရပ်တည်လျှက်ရှိကြပါသည်။ ထိုသို့ ထူးချွန်ကျောင်းသား၊ကျာင်းသူများကို STI Myanmar University မှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရပ်များကို ပြည်တွင်းမှာပင်
သင်ယူလေ့လာခွင့်ရရှိပြီး ၊ ထိုပညာရပ်များဖြင့် ရခိုင်ဒေသ အပါအ၀င်
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သောနေရာများတွင်ပြန်လည် အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းဖြင့် လူငယ်တို့၏
အနာဂတ်ဘ၀အာင်မြင်တိုးတက်စေရန်နှင့် ၊ တိုင်းပြည်အတွက် အားကိုးအားထားပြုနိုင်သော လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များဖြင့် ပြည့်စုံရန် လ်ုအပ်ပါသည်။
1. Must holdabachelor degree relevant to apply for the intended course.
2. Must have enrolled into one of the masters programs for 2018 intake.
3. Proven academic and professional merit. Candidates with outstanding ability to aptly represent the institution will be considered,
4. Must demonstrate financial need.
5. Candidates must not be recipients of other scholarships or have any other sources of education sponsorship.
6. A written reference from your academic supervisor/immediate superior/ employer has to be submitted.
7. The candidates must not haveacriminal record or must not be under police investigation.
8. International candidates must have an approved Myanmar visa before the scholarship applications deadline.
Full NameSex​Date of Birth / Age​NRC / Passport No. ​Postal address ​ E-mail address ​ Contact number ​
5. Recommendation from the police office on – no criminal record
6. Copies of national identity/ passport & visa
7. Copies of the degrees, certificates
8. Evidence of financial hardship such as salary statement (if any)
9. Evidence of contribution to the community (if any)
10. An essay on why you would like to pursue this course (not more than 500 words)
11. An essay on how you would participate in stabilization of Rakhine State (500 – 800 words)
In connection with Individual Achievement Awards,
STIMU reserves the right to impose additional, minor reasonable restrictions and/or requirements upon the awarding of Individual Achievement Awards and the administration of such grants. Any substantial or material changes will be made only with approval of the Board of Directors.
ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုသူများသည် ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံး STI Myanmar
University တည်၇ှိရာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးရှိကျာင်းအသီးသီးသို့ ဆက်သွယ် ပေးပို့လျှာက်ထားရပါမည်။